FITONDRANA TETEZAMITA : TSY NANDRANTO HAIRAHA ANKOATRY NY FAMPIKATSOANA – MyDago.com aime Madagascar
FITONDRANA TETEZAMITA : TSY NANDRANTO HAIRAHA ANKOATRY NY FAMPIKATSOANA
Fanonganam-panjakana nataon’i Rajoelina Andry,tamin’ny taona 2009, no niteraka izao savorovoro sy tsy filaminana mianjady amin’ny Firenena sy ny fahoriana mampijaly ny Malagasy izao.
Taorian’ireny fihaonana niteraka fifanarahana tany Maputo, Addis Abbeba, Gaborone, Sandtown, Pretoriat ireny dia nandaha sy tsy nanaja ny soniany Rajoelina Andry ka nanomboka nikatso avokoa ny fiainam-pirenena amin’ny lafiny rehetra.
Niainga tamin’ny resaka « ankolafy efatra» ny ezaka fandaminana ny raharaha dia nahita hevitra nanova izany ho resaka « antoko » indray. Lasa 11 ny mpanao sonia ny « Tondro Zotra ». Lasa « garaban-tsahona » ny Kongresin’ny Tetezamita sy ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita. Tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny raharaha politika satria tsy misy miraharaha ny « marimaritra iraisana» (consensualité) sy ny « tsy fanilihana » (inclusivité). Vokany, mikatso ny Tondro Zotra.
Na dia miezaka mandeha atsy sy aroa mitady irika ahazoana fankatoavana iraisam-pirenena aza Rajoelina Andry dia tsy mahazo. Ny antony ? Mpanongam-panjakana ka ny Fifanarahan’i Cotonou aza no mendrika hampiharina aminy.
Mikatso manaraka izany koa ny famatsiam-bola avy any ivelany. Tsy misy asa fampan-drosoana eto amin’ny Firenena. Miantona avokoa ny tetikasa rehetra. Ny toekarena moa efa miiba. Tsy afaka mividy ny trano mora, vary mora (1000 Ariary mahery), menaka mora (5100 Ar), sy ireo mora rehetra ny 95% ny Malagasy.
Mikatso ny fiainam-bahoaka. Mitokona ny mpampianatra, ny mpitsabo.
Misy mpampianatra, eto andrenivohitra, miezaka mampita ny “hairahany” tsy hampikatso ny sehatry ny fanabeazana sy ho
fitsinjovana ny mpianatra sy ny raiamandreny, hono. Mampitombo ny fampikatsoana izany fihetsika manohariana izay miendrika fitiavan-tena sy fiheverana ny hafa tsy mahay manavaka ny sarisarim-pitsinjovana sy ny tena fiarovana marina ny tombotsoan’ny zanaka malagasy. Tsy mandranto fianarana eto an-toerana, angamba, ny taranak’izy ireny ka tsy maninona na diplaoma bojy aza no omena ny mpianatra. Efa manomboka mikatso koa anefa ny famonoana afo etsy sy eroa amin’ny alàlan’ny vola sy ny fandrahonana amin’ny endriny maro samy hafa.
Raha nisosa tsara, tsy nisy sakana, ny fanafihana tamin’ny “lakrimozeny” ny olompirenena tsy mba mañana fitaovam-piadiana dia manomboka mikatso koa izao ny “tafibahoaka” any Befotaka, manolohana an’i Remenabila.
Mazava fa tsy maintsy “ady anaty akata” no hatrehin’ny miaramila any. Ka iza amin’ireo holafitra misy ao amin’ny tafika no matianina sy manana fahaizana ary traikefa amin’izany?
Variana ny sivily raha nahita tamin’ny haino aman-jery omaly fa hiantso ny (miaramila) frantsay hisambotra an’i Remenabila ny Minisitry ny Atitany malagasy.
Mikatso koa izany ny “fiandrianam-pirenena” ka tsy mampaninona intsony na dia ny nanjanaka ity Firenena ity indray aza no asaina hanafika ny mpiray tanindrazana. Zazakely tsy tafavoaka amin’ny fandriky ny fikatsoana ve ka miantso ny “renimalala”. Ny tafiky ny SADC aza nolazaina fa hanaovana fanazaran-tena raha miditra eto.
Ankoatry ny fampikatsoana, efa herinandro izao, amin’ny fananganana lampihazo eo alohan’ny Hotely Carlton izay efa nampimenomenona ny mpampiasa fiarakodia dia nahay nampikatso ny fifamoivoizana teto an-drenivoitra koa ny “tafika malagasy” omaly.. Nikatso sy nitohana tsy nisy toy izany ny fiarakodia niazo an’Anosy iny. Fa inona no nitranga? Nanao famerenana (farany?) ny matso hataony amin’ny 26 Jona ry zareo “tandroka aron’ny (be)vozona” ka tsy azo nandehanan’ny fiarakodia ny manodidina ny ranomiandron’Anosy. Raha mba Remenabila mantsy io tsangambato eo afovoan’Anosy io dia efa nilavolefona tsy nila ny frantsay intsony ny tafika.
Mahamenatra sy manalabaraka ny Malagasy amin’ny any ivelany mihitsy izao fikatsoana misy eto amin’ny Firenena izao.
Tsy nisy nataon’ny “fitondrana tetezamita(tra)” izao afa tsy ny fampikatsoana, eo amin’ny lafiny rehetr,a ity Firenena ity. Tsy nisy tombony ho an’ny mpiray tanindrazana ireo fampikatsoana ireo. Nivarina any an-kady miha-lalina isan’andro vaky izao fitondrana izao.
Ny TGV-ndRajoelina Andry no nikatso, tsy afa-nihetsika ka ny Firenena no notereny hiverin-dàlana. Nanome “tsodrora” izy dia nampandry adrisa ary noraofiny ny harem-pirenena ka ny varavarambe hivoahana sisa no tadiaviny.
“Ny tody, hono, tsy misy fa ny atao no miverina” izany hoe ny fampikatsoana ny fitondran-dRajoelina Andry izany no vahaolana amin’izao fikatsoan’ny Firenena izao.
740 miliara ariary ny fitambaran’ireo ny vola voahodin’ny fitondrana Tetezamita hoy Pr Zafy Albert
15 réflexions sur « FITONDRANA TETEZAMITA : TSY NANDRANTO HAIRAHA ANKOATRY NY FAMPIKATSOANA »
24 juin 2012 à 7 h 43 min
I Rabe Vôpl sy denise mpivaro-pika ary ny Tanora Vongany dia mbola hilza ndray fa favy ny foza kanefa hay mou ny an-drizareo mitorona no hainy!!! tsy mbola nisy naharesy ny foza tokou alou raha ny fampikatsoana sy fanapotehana ny firenena sy ny Malagasy iray manontolo olona efa mitampina tay ny masony no tsy mahita an’zany!
24 juin 2012 à 8 h 02 min
Tsy misy maharesy ny foza tokoa raha ny fampikatsohana samy hafa no jerena;
Tsy misy maharesy ny mponin’antananarivo kosa raha ny fimenomenomana fandaniana rora!!!
Tsy fanakiviana ny ahy fa « constat » fotsiny:
mendrika antsika izao manjò antsika izao,isika no nitady an’izao koa rahefa tsy anao azy dia samia mimpirina fotsiny hoy fitenenana.
24 juin 2012 à 9 h 32 min
disons plutot la COMMUNAUTE INTERNATIONALE qui bloque tout exemple L ONU cette personne n est pas elu mais arriver au pouvoir par COUT D ETAT
le pire c est comdamner par l article de CONTOUNOU
mais ONU UA UE SADC USA FRANCE ferment les yeux et accablent plutot la MOUVANCE RAVALO
a quoi serrt les condantions proclames par L UNION AFRICAINE contre ANDRY VENDRANA
il assiste sans probleme au tribune de L ONU a NEW YORK et dernierement a RIOA
les 20 millions de MALAGASY se battent seules devant le CI qui reste aveugle et sourd la suite car on ne se laisse pas faire
Manahirana ny C.I. UE SADC ONU na ny T.P.I.na ny COTOUNOU sy izao tontolo izao no miteny hoe : Ekenay io fitondran-dRadomelina io dia mody ny reconnaissance fotsiny no tsy homeny fa ny hare-pirenena malagasy dia « hanjakazakao samy manana » , tsy eken-dry zareo @ vava ny fitondram-poza fa ekeny @ asa
24 juin 2012 à 17 h 10 min
Revelojaona fidy;Rama;<<< miombo-kevitra aminareo tokoa ary dia henatra lehibe ho an-Antananarivo tokoa ny fitrangan-javatra rehetra satria vao lany Maire fotsiny i Domelina dia hoy ilay namako iray any Toamasina izay" leo fandrosoana Antananarivo" dia tsy nisy diso ny fitranagan-javatra ary izao dia Madagasikara no potika fa ny an'Antananarivo dia raharaha nilaina!!!hitoeran'ny fialonana sy ny ory hava-manana eto @ tanàna dia mamitaka sy mamporisika ireo ireo kamo be tenda fotsiny hanaonao foana!!!Ireo Mpanao politika avy any @ faritra toa ny hanambàka ny avy any @ niaviany ndray no hataony refa tonga eto!!! Ny CI sns mou dia toa zarany aza vendrana dia avelany ho ringana ny harem-pirenena Bois de rose sy volamena sns… soratra fotsiny zay accord de Cotonou zany!!!dia eto isika!!! asa karazan'Olona inona??? no mbola manohana izao faharatsiana hiainana eto @ Tanàna izao?????
25 juin 2012 à 7 h 33 min
ZNY E, MARINA AVOKOA IZAY VOALAZA NY NAMANA REHETRA SAINGY MISY NY ANTONY AVY ANY AMBONY – RAHA TSY MISY IZAO , TSY HIOVA ANGAMBA ANTANANARIVO – NY ZAVATRA REHETRA IZAY MITRANGA DIA HEVERO HOE : MISY ANTONY AVOKOA MBA HIOVANA RAHA RATSY ARY MBA TSY HITSAHATRA NY MIVAVAKA –
25 juin 2012 à 9 h 27 min
Fanamafisana : zavatra roa no nahafinaritra ahy tao ary isaorana ny mpanoratra:
– Manomboka mikatso ny famonoana afo amin’ny alalan’ny vola.
– Raha mba Rabemila moa io tsangambato eo afovoanan’Anosy io dia efa nilavo lefona.
25 juin 2012 à 18 h 07 min
Mafy be ilay voalazanao Ravelojaona nefa izany mihintsy no izy
ary io efa tsy sasatra aho ny milaza @’ireo Gasy ao an-toerana
fa « : Izao no tadiavinareo » rehefa mimenomenona izy ireo,marina daholo ny voalazanareo eto,
ary mankarary fo nefa indrisy !!!soa fa teo i Raozy mampiakatra ny MÔRALY,mankasitraka Raozy a!!!
Dia nitondra inona anefa izao ny vavaka ranavalona ? Nanampy ve Andriamanitra sa tena mendrika an’ny malagasy izao sazy izao ?
Ny an’i Raozy mantsy toa io Andriamanitra io foana !
Asiako resaka kely ny @’ilay iraisam-pirenena ,
sarotra ho an’izy ireo no handà satria isika aza nanaiky indrindra fa ny
ankolafy dada,efa nandà izy ireo ary hatra@’izao aza fa isika anie no misy MISOLELAKA e!! ambava tsy mila
fa ny ao am-po taralila e!!!isika no nankasitraka an’i domelina voalohany ary mbola mandà izy ireo na mivantana
izany ny ankolaka fa misaora ny avo isika fa mbola tsy manaiky izy ireo hatr@’izao aloha, isika no malailay fonosina
ary marina ny voalazan’i ZANAK’i RAOELINA fa ao @’io antoko dada ireo mihinsy no MISAKANA sy VOAOZONA
sa VOAVIDY tsy hay???tokony i dada mba hitady lalana hafa fa tsy hiantehitra @ hazoboboka eto foana isika.
Aza omena tsiny mihintsy ny hafa fa ISIKA samy isika ihany no mifamahan-dalitra eto.
Mangiana ialahy ! resakay sy Raozy aty aza hidirana( aza tezitra an!)
Sakamalao sy avozo ka samy manana ny hanitra ho azy,
mba tadiavo foana rehefa misy zavatra fa tsy maintsy ao foana ny antony ,raha tena ao ilay finoana
ary amiko dia hilaina ny fampiakarana môraly toy itony @’izao andro izao,tsy hitanao fa efa valaka ve
ny vahoaka ry Kintana ??izaho manokana dia mila io zavatra voalazan’i Raozy io satria tsy hitako aloha
hatr@’izao hoe ahoana? fa anajaranao ny mandray izay azo raisina dia avelanao izay azo avela!!!MAZAVA BE!!
Io foana ilay efa teneniko anareo fa mananà FINOANA e!!!
Efa miteny aho fa any an-trano (an-dakozia, WC ets..), na any am-piangonana no mivavaka !
Amin’izao vanin’andro izao tsy mitondra antsika ho aiza izany ! Ho fanajàna an’ireo olona tena mivavaka sy manaja an’izay voasoratra ao anatin’ny SORATRA MASINA no mbola hilazako an’izany, fa tsy ireto manonononona ny anaran’Andriamanitra amin’apa !
Tsy vitan’ny vavaka ny nandresena ny nazis sy ireo niray tsikombakomba taminy ! Tsy nahazo fahaleovan-tena ny vahoaka malagasy, raha tsy teo ireo maheri-fo, niady tamin’ny fanandevozana sy fanjanahana !
25 juin 2012 à 21 h 19 min
Mba lazao ahy ary hoe ry Kintana ??inona no azo hatao @’izao vanin’andro izao,
rahampitso ny 26 an,ao anaty aizina tanteraka ny vahoaka (madinika io,dada tsy mbola avy
ny loza miantra tsy voatanisa fa saika isam-baravarana,dia iza no ho rangotina koa tsy aleo ve mivavaka aloha
mba tsy ho kivy loatra?? aiza ary ianao izany???io masiaka ratsy io foana efa lazaina foana ianao.
Dia avadika ny resaka fa hay dà mahay mahandro Gasy be, trondro nahandro Gasy e!!vorivori-kena e!! mampilenda ery
izato izy.marina tokoa ny anao fa tena mihidy ilay vavony , raha azo hatao dia hifady hena mihintsy aho angamba rahampitso
fa tena malahelo ny mpiray tanindrazana amiko aho, tsy rariny loatra e!!mampiteny ny moana mihintsy ilay toe-draharaha.
Indrisy izany 26 t@ andron’i dada marina !!!!!mitsonika @ sandry ny menaka ,feno ny tongotra sns……..
26 juin 2012 à 8 h 38 min
Ataovy izay tena mety tokony ho atao, fa
Précédent Article précédent : VOT : mitady an’i Dada ny vahoaka madinika !
Suivant Article suivant : HIATO NY ASAM-PANJAKANA NY 02 JOLAY…